CarPlay inosanganisa Google Mepu uye Waze muIOS 12 | Ndinobva mac
CarPlay inosanganisa Google Mepu uye Waze muIOS 12
Isu tinofanirwa kutaura kuti CarPlay haina kuvandudzika zvakanyanya mushure menguva yese yange ichiwanikwa, asi zvirinani vakabvuma kuwedzera kumwe kunyorera uye mune iyi nyaya mbiri dze idzo dzinoshandiswa nevanhu vazhinji kufamba: Google Mepu uye Waze.
Apple ine Mepu yekushandisa yeVashandisi veCarPlay, asi kuve nemaapplication maviri aya hakubvise, asi zvakapesana uye isu tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe vachatanga kushandisa CarPlay zvimwe izvozvi ndiani akaburitsa kuuya kwemaapp maviri aya kuApple system yemota.
Google Mepu uye Waze muCarPlay
Nhau dzeGoogle Mepu uye Waze muCarPlay yakauya nekushamisika uye vashoma vakafunga kuti Apple yakanga yaronga kuwedzera maapp. Nhasi kuitiswa kweCarPlay mumotokari kuri kwakazara uye nerombo rakanaka munyika medu angangoita ese mabrandi anowedzera tekinoroji yekubatanidza yedu iPhone, kana chero chishandiso chine Android inoshanda sisitimu uye izvi zvakanaka kune kutyaira kuchengeteka.
Zvinotarisirwa kuti nekuuya kwevaviri-vechitatu-bato kunyorera, vamwe vazhinji vachatevera, asi ikozvino kunyorera kunyorera kuri kunonokaSezvatakambotaura pakutanga kwechinyorwa chino, Apple inoitora zvakadzikama uye inowedzera maapplication zvishoma nezvishoma. Chinhu chakanaka ndechekuti CarPlay ichave zvakare yakavhurika kune vanogadzira kuti vatore maoko avo uye nekudaro netarisiro kuti kufarira kwevaviri kuchasimba uye ivo vachazadzisa zvimwe zvinoshandiswa kuhurongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iOS » CarPlay inosanganisa Google Mepu uye Waze muIOS 12